SUSE Inowedzera Kuendeswa uye Kuparadzirwa kweContainerized uye Cloud Native Zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
SUSE inoenderera mberi nekuvandudza masevhisi ayo pamwe nekuvandudza kukuru mukutumirwa uye kugoverwa kwecontactized uye gore -zvizvarwa mashandiro. SUSE CaaS Platform 4 uye SUSE Cloud Chikumbiro Platform 1.5 inosimudzira chiitiko cheKubernetes chevagadziri, zvikwata zveDevOps, uye vanoshanda papuratifomu. Izvi zvinogadziridza kusimudzira kuendesa uye kutsigirwa kwekambani mhinduro kugadzira, kuendesa, uye kugadzirisa mitoro yebasa chero kupi, kungave kuri-munzvimbo, musanganiswa, kana kuwanda-gore, ine yakasarudzika sevhisi, kukosha, uye kuchinjika.
SUSE yakamiswa senge yekutanga kupa mhinduro neepamberi networking muKubernetes zvichienderana nebasa re yakavhurwa sosi Cilium. Izvi zvinogonesa vashandisi veKubernetes kukwidziridza chengetedzo yemahombe-ekushandisa pamwe neepamusoro-kuita packet kusefa uye ekutaurirana ekuchengetedza marongero ayo ari nyore kuita uye kudzora.
Uye zvakare, SUSE inosvitsa nyowani kunyorera kuwanikwa uye kuendesa kugona iyo inobvumira vashandisi kukurumidza uye nyore nyore kuendesa kunyorera uye masevhisi ayo akaburitswa seHelm ngoro, kusanganisira mazana akavhurwa sosi DevOps maturusi uye yechitatu-bato mhinduro, pamwe nekushandisa uye masevhisi akagadzirwa mukati-mumba. Mhinduro dzemazuva ano dzekuita kuti basa rive nyore uye nekuvandudza ruzivo rwevatengi vanovimba neSUSE mhinduro.
Kune avo vasingazvizive parizvino, iti SUSE CaaS Platform 4 ndiyo yazvino vhezheni, yechinguvana, ye manejimendi chikuva che Kubernetes-based midziyo. Ipo SUSE Cloud Kunyorera Platform 1.5 ndiyo yazvino vhezheni yeshanduro yekuendesa chikuva cheKubernetes.
Para mamwe mashoko pano:
Cilium chirongwa chepamutemo peji
Kubernetes peji yepamutemo
SUSE Yepamutemo Peji
Mapeji ane data nezve mapuratifomu SUSE CaaS Platform / SUSE Cloud Kunyorera Platform
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » SUSE inowedzera kuendesa uye kugoverwa kwecontactized uye gore -zvizvarwa zvekushandisa